ရှင်းလင်းမှု- ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 30, 2021 ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 30, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်ကြိုက် Shopify အပြင်အဆင်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲကာ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းဝတ်စုံဆိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို ရှုပ်ထွေးခြင်း သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးခြင်းမရှိဘဲ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ရိုးရှင်းသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်း သေချာစေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များပါရှိသော ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပိုင်းကို မူရင်းဒေသတွင် ထုတ်ဝေပါက၊ ၎င်းသည် စျေးနှုန်းကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေပြီး လှည်းခလုတ်သို့ ထည့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပါက၊ ဧည့်သည်သည် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များရှိကြောင်းကို လွဲချော်သွားနိုင်ပါသည်။
အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန် ကဏ္ဍတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ More Information ကို. သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် လွှင့်တင်သောအခါ၊ ဧည့်သည်များသည် ၎င်းကို ချဲ့ထွင်ရန် ကဏ္ဍကို မနှိပ်မိကြောင်း ချက်ချင်းသတိပြုမိပါသည်။ ပြုပြင်မှုမှာ အတော်လေးကို သိမ်မွေ့ပါတယ်… ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ဘေးရှိ ညွှန်ပြချက်လေးတစ်ခု။ ၎င်းကို အကောင်အထည် ဖော်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပူပေးမြေပုံများကို ကြည့်ရှုပြီး ယခုအခါ များပြားလှသော လာရောက်လည်ပတ်သူ အများအပြားသည် ခလုတ်ခလုတ်နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစည်းအဝေးများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အပူမြေပုံများ မထုတ်လုပ်ပါက ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်နိုင်သလို ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်း စမ်းသပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်း အမျိုးအစားတစ်ခုခုကို ဖန်တီးနေချိန်တွင် အပူပေးပုံဖော်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အပူမြေပုံဆွဲခြင်းဖြေရှင်းချက်သည်အတော်လေးစျေးကြီးနိုင်သည်။ အများစုသည် သင်ခြေရာခံရန် သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်လိုသော ဧည့်သည်များ သို့မဟုတ် ဆက်ရှင်များပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ ဧရာမတစ်ဦးသည် အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ရရှိနိုင်ပါသည်။ Microsoft Clarity. သင့်ဆိုက်တွင် သို့မဟုတ် သင်၏ Tag Management ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု ခြေရာခံကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပြီး အပိုင်းများကို ဖမ်းယူထားသည့်အတိုင်း နာရီပိုင်းအတွင်း သင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ပို၍ကောင်းသည်မှာ၊ Clarity တွင် Google Analytics ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပါရှိသည်... သင်၏ Google Analytics ဒက်ရှ်ဘုတ်အတွင်း စက်ရှင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းများအတွက် အဆင်ပြေသောလင့်ခ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်း။ Clarity သည် the custom dimension ကို ဖန်တီးသည်။ ရှင်းလင်းမှု ပြန်ဖွင့်ခြင်း URL စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှု အစုအဝေးနှင့်အတူ။ ဘေးထွက်မှတ်ချက်… ဤအချိန်တွင် သင်သည် Clarity နှင့် ပေါင်းစည်းရန် ဝဘ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာ ထည့်နိုင်သည်။
Microsoft Clarity သည် အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်...
သင့်စာမျက်နှာအားလုံးအတွက် အပူမြေပုံများကို အလိုအလျောက်ဖန်တီးပါ။ လူများ ကလစ်နှိပ်သည့်နေရာ၊ လျစ်လျူရှုထားသည်ကို ကြည့်ပြီး မည်မျှအထိ လှိမ့်မည်ကို ကြည့်ပါ။
စက်ရှင်မှတ်တမ်းများဖြင့် သင့်ဆိုက်ကို လူများကအသုံးပြုပုံကို ကြည့်ရှုပါ။ လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများကို စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သည်များကို လေ့လာပြီး စိတ်ကူးသစ်များကို စမ်းသပ်ပါ။
အသုံးပြုသူများ စိတ်ပျက်သွားသည့်နေရာကို အမြန်ရှာဖွေပြီး ဤပြဿနာများကို အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
Clarity သည် GDPR နှင့် CCPA အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး၊ နမူနာများကို အသုံးမပြုဘဲ open source ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ Clarity ၏ စွမ်းဆောင်ချက်အားလုံးကို လုံးဝလုံးဝ ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ သင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည့်အခါမျှ ယာဉ်အသွားအလာကန့်သတ်ချက်ထဲသို့ ပြေးဝင်မည်မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် အခပေးဗားရှင်းတစ်ခုသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တွန်းအားပေးခံရမည်မဟုတ်ပါ... ၎င်းသည် ထာဝရအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Microsoft Clarity အတွက် စာရင်းသွင်းပါ။
Tags: ရှင်းလင်းခြင်းအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုပိုကောင်းအောင်microsoft ကြည်လင်ပြတ်သားမှုsession မှတ်တမ်းများsite ကို optimizationစမ်းသပ်ခြင်းwebsite ကို optimization